Izihloko eziBalaseleyo zeMicimbi yeWordPress | Martech Zone
NgoLwesithathu, Aprili 1, 2015 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Silungiselela i-fundraiser yethu yesibini yonyaka yeLeukemia kunye neLymphoma Society nge Umnyhadala woMculo kunye neTekhnoloji apha e-Indianapolis nge-26 ka-Epreli. Kunyaka ophelileyo siphakamise ngaphezulu kwe- $ 30,000 kwaye sinethemba lokuyibetha kulo nyaka.
Kulo nyaka sigqibe kwelokuba siwuphindaphinde lo msitho ukuze kube lula ukuwukhumbula, kwaye sibeke indawo ebonakalisa ngcono ulonwabo ebesinalo kunyaka ophelileyo. Uvuyo lwethu ekubuyiseni ngokutsha ngokukhawuleza lwayeka, nangona kunjalo, njengoko savavanya umxholo weWordPress emva komxholo weWordPress owenzelwe imicimbi. Ukuyibeka ngokungathandabuzekiyo, bamunce nje.
Ngapha koko, eyona ikaliwe Umxholo womsitho Kwindawo yethu oyithandayo yomxholo weWordPress usibuyisele emva kwiiveki njengoko besingakwazi nokuyijonga. Ukunqongophala kwedatha yomzekelo, amaxwebhu amabi, kunye nenkxaso enguziro yatyhala ukuba sinikezele.
Sibenethamsanqa elikhulu kangangokuba bendithandabuza ngokunyanisekileyo ukwenza enye into yokuthenga umxholo ... kodwa ndiye ndaya kwiiShowthemes kwaye bendinomdla wokunikela kwabo, kunye nokugxila kwabo, kwimixholo yomsitho.
Kwisithuba seeyure ezimbalwa bendinendawo eyenzelwe ngokupheleleyo kubo Umxholo weFudge kwaye inabantu ngaphandle kwemicimbi konke konke! Ikwanokuhlala iiwidget zekitriti ze-Eventbrite kakuhle!
Umnyhadala kunye nemixholo yenkomfa nayo iyaphendula, isenza indawo yakho yomnyhadala okanye imicrosite entle ukukhangela- nakwizikrini ezincinci. Siyayithanda imixholo kangangokuba sayisayina njengendibaniselwano kwaye sinezo zonxibelelwano kuyo yonke le post. Ndiyathemba ukuba uyabathanda kwaye nathi siyakubona nge-26 ka-Epreli kumsitho wethu!
Inqaku elisecaleni: Kunyaka olandelayo, ndiqinisekile ukuba siza kulungisa umxholo womntwana onikezela uphawu lokuqinisa ... kodwa siyachukumiseka ngumxholo njengoko unjalo!
tags: Umxholo wenkomfaimixholo yenkomfaUmxholo womsithoumbonisoumxholo we-vertoh
Amanyathelo ali-12 eKwakha iBango le-Arhente yakho eNtsha
Meyi 10, 2015 kwi-6: 56 AM
Kubonakala kupholile! Ndihlala ndifunga nguGeneratePress. Akujoliswanga kwimisitho kodwa yinto entle engenanto engenanto yokwenza naluphi na uhlobo lokujonga olulandelayo.